အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: October 2009
လူ့ သက်တမ်းပိုင်း ထက်ဝက်ကျိုးပေမဲ့…
ကျပ်မပြည့်တဲ့ လူအိုကြီးရဲ့ ရ၆ နှစ် ထက်စာ..
မင်း လူဖြစ်ရ သာ တယ်။
“ရေကြည်နှောက်တယ် ” ညှိုးနေတဲ့ မြေခွေးဆိုး အတွက်..
ရတဲ့ နည်းနဲ့ပြသ
ကျောက်ဆောင်တောင် ပြိုရိုးရှိတာမို့ 
အနိုင်ဆို တာ..အပါးအမြဲတမ်း မခစားဘူး.
လက်ခုတ်တီးလို့သီချင်းဆို..
ကိုညီညီအောင် ၄၀ ပြည့် မွေးနေ့ သို့ 
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:52 AM0comments
ဒီခေါင်းပျံကြီးတော့ သေတောင် ကျုပ် မစီးဘူးတော်..
ဘုရားစူး ပါဟဲ့. သူ့ရဲ့ လေယာဉ်ပျံ
ပျံနေတဲ့ အခိုက်အတန့် 
သေတော့ မလို လက်မတင်လေးလွတ်တယ်။
အသက်ကလေး မျှဉ်မျှဉ်..တဲတဲ ကလေးဘဲ ကျန်တယ်။
မြန်မာချင်းမို့ များ အားပေးမလားကြံပါတယ်။.
စွန့် ပစ်ရမဲ့ နိုင်ငံတကာလေကြောင်းက
ချစ်တီးလို တမျှဉ်းမျှဉ်းနဲ့ ယူ..
ဂျုံး ဂျုံး ကလိုင်း..ဒုံး ဒုံး ဒုန်း ဒိုင်း.လည်း မြည်
ခပ်စုတ်ပဲ့ပဲ့ ရွာပွဲဈေးက ချားရဟတ်လို
ပူတာအိုအနား ပေ ၃၀၀၀ အမြင့်
ပြုန်းပြုန်းပြုတ် ခရီးသည် ၆၂ ဦး.
မြစ်ကြီးနား အထွက် နာရီဝက်..
ကျုပ် လေထဲကနေ ဇောက်ထိုးကျပြီထင်ရဲ့..
ပရိက္ခရား ကုလား လို
အသုဘလေယာဉ် ပိုက်ဆံပေးမစီးကြပါနဲ့ 
အလကားပေးတောင် ယောင်လို့ မစီး..
သေဘေးနီးတဲ့ သူ့ လေယာဉ်စုတ်
စက်ပျက် မီးခိုး အင်ဂျင်မီး တဖုတ်ဖုတ်
သေချင်းဆိုးနဲ့သေမဲ့မသာ.
မသဒ္ဓါ ( ၁၀။၂၉။၂၀၀၉)
ရွာကဂျီးတော်ကြီးရဲ့ ကိုယ်တွေ့ မှတ်တမ်းကလေးပေါ့
သူကသူ့ ကိုတွေ့ ရင် လည်ပင်းကို တက်နင်း သတ်ချင်ပါသတဲ့…လေယာဉ်အစုတ်တွေ ကိုသ..လူတွေကို မသာချချ နေလို့ပါတဲ့ရှင်
ပုဂံလေယာဉ် ကြောင်း ပိုင်လေယာဉ် ပျက်ကျ
ဖေဖေါ်ဝါရီ- ၁၉ ၂၀၀၈။
ပုဂံလေကြောင်း ပိုင်း ART - 72 အမျိုးအစားလေယဉ်ဟာ ဒီနေ နေလည် ၃နာရီ ၂၀ မိနစ်မှာ ရန်ကုန်မှ့ ပူတာအိုလေယဉ်ကွင်းကိုအဆင်းမှာ စက်ချို့ ယွင်းမှု့ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပေသုံးထောင်အမြင့်မှ ခါးကျိုး ပြီးပျက်ကြသွားပါတယ်။ လေယဉ်ပေါ်မှာ ခရီးသည် ၆၂ ဦးပါသွားပါတယ်။ နိင်ငံခြားသား ၄ ဦးသေဆုံးတယ်။ အေအာတီ- ၇၂ အမျိုးစားလေယဉ်က ပြင်သစ်လုပ်လေယဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခရီစဉ်တွေအားလုံးကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။ အဲပုဂံ လေကြောင်းပိုင်ရှင် တေဇကို ပျဉ်းမနာကိုလာခဲ့ဖို့ ခေါ်ယူထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရန်ကုန် လေယဉ်ကွင်းက ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေ သူနာပြုတွေကို ကားနဲ့ အပြည့်တင်ပြီး ပူတာအိုကိုတက်သွားကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရန်ကုန်လေယဉ်ကွင်းမှာ လူတွေ ချောက်ကပ်သွားတယ်။ လေယဉ်အဆင်းအတက်တွေလုံးဝရပ်နားသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခြေအနေကတော့အတော့ကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစရာပဲ ဗျာ။ ပေသုံးထောင်က ပြုတ်ကျလာတာ လူတွေဟာ ကျနော်တို့ ထင်တာထက် ဆိုးမယ်ဗျ လို့ရန်ကုန်လေယဉ်ကွင်းက လေယဉ်အင်ဂျင်နီယာတဦးကဆိုပါတယ်။
နအဖ - မဆလခေတ်မှာ လေယဉ် ကို ထိမ်းသိမ်းနိင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုတော့
လပ်ပေးလပ်ယူမှု၊ ချစားမှုတွေ က ဗိုလ်ချုပ်တွေကနေ အောက်ခြေ၀န်ထမ်းတွေအထိ ဖြစ်ခြင်တိုင်းဖြစ်နေကြတဲ့အတွက် မြန်မာပြည်က မည်သသည့် လေယဉ်ကို မဆိုစီနင်းတာဟာ
အခေါင်းကိုစီးနင်းနေတာနဲ့ အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ လေယဉ်ပျံနဲ့ မတူပဲ ပျံနေတဲ့အခေါင်းတွေလို ဆိုရင်မမှားပါဘူး။ ၈၈ မဖြစ်ခင် - ကပတိန် ဖေသန်းဝင်း မောင်နှင်းလာတဲ့ လေယဉ်ဟာ တူးရင်တောင်နဲ့ တိုက်ပြီး ပျက်ကျသွားခဲ့ဘူးပါတယ်။ နောက်တော့ တိုင်းလုံးကျော်သင်္ဘေ ရန်ကုန်မြစ်ဝမှာ နစ်မြုပ်ခဲ့တယ်။ လူတွေသောက်သောက်လဲသေပါတယ်။ နောက်တော့ အရေးအခင်းကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲ။ အခုလည်း ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွေ တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတာဟာ တိုင်းပြည်ကမှာ လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးတွေဖြစ်ဖို့ အတွက် နမိတ်ဆိုးတွေတော့ ပြနေပြီလို့အမည်မဖေါ်လိုတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ ခံတဦးက ကဆိုပါတယ်။
လက်သည် မလို. ကျုပ်အမေ
မိုးဟေကို လို မိုက်တယ်။
ကျုပ်တို့ကြွက်ရာဇ၀င်..
ကျုပ်တို့အာရှစပါးကျီ..
မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဆန်ပေါ်ချိန်ဆို ကြွက်တွေ ဖီး..
နာဂစ်မတိုင်ခင်က..ကြွက်ဆိုတာ ဇီးကွက် သိန်းစွန်..
အခု..ရေထဲ မြွေတွေ သေ…
ရှိတဲ့မြွေလည်း မှောင်ခိုဈေးနဲ့ထိုင်းရောက်ကုန်တာနဲ့ 
တဖြွတ်ဖြွတ် အဖေ သားတင်ကောင်းတာ..
တောင်သူတွေ ရဲ့ ကျိုးတိုးကြဲတဲ လယ်ကွက်.
ထွက်ရာ မျိုးစေ့ပိန်လည်း ..ကြီးလာတဲ့ချိန်ထိစောင့်နိုင်ဘူး..
သမိုင်းပေး ဒို့ တာဝန်အရေးသုံးပါး..
ဘဘရေ မင်းက အမျိုးမချစ်ပေတဲ့
ကြွက် အမြစ်ဖြုတ်ရေး စီမံချက်တဲ့
အတီးအတ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ကြွက်မြီး စစ်ဆင်ရေး
ကြွက်မြီး ၁၀ချောင်း နူန်းလာအပ်
မအပ်နိုင် ဒဏ်ငွေ နှစ်ထောင်ကျပ်တဲ့
လပွတ္တာ ပြင်စလူ အုတ်တွင်း
အမြီးတို လင်ဘဲ ရ..ကလေးမွေးကျ..
သူတို့ လည်း ထောင်ထဲက လွတ်..
ထောက်ပန့် မပေးတဲ့ နအဖ
ဒီလိုနဲ့ ကျူပ်တို့ တမျိုးလုံး..အမြီးပြတ်ကြွက်…
လယ်ကြွက် ဘ၀ကျုပ် ခပ်ကြော့ကြော့
ခရိုနီ လို..ဖား ခြေရာခွက်ထဲ မော့နေဆဲ..
မသဒ္ဓါ (၁၀။ ၂၄။၂၀၀၉)
ဧရာဝတီတိုင်းလယ်များ ကြွက်ကြောင့် သီးနှံပျက်စီး
နာဂစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသက တချို့မြို့နယ်တွေမှာ ဒီနှစ် ကြွက်တွေ ထူးထူးခြားခြား များပြားလာတာကြောင့် စိုက်ပျိုးထားတဲ့ စပါးပင်တွေ အတော်များများ ပျက်စီးနေရပါတယ်။ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ အာဏာပိုင်တွေက ကြွက်နှိမ်နင်းဖို့အတွက် တအိမ်ထောင်ကို တပတ် ၅ ကောင်နှုန်းနဲ့ ဖမ်းဆီးခိုင်းပြီး မရသူတွေကို ဒဏ်ရိုက်နေတာကြောင့် ပြည်သူတွေမှာ အခက်တွေ့နေကြရတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုတော့ ထိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် ကိုမိုးဇော်က တင်ပြပေးထားတယ်။
နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အခုလို ကြွက်သောင်းကျန်းနေတဲ့ ဒေသတွေကတော့ ဘိုကလေး၊ ဖျာပုံ၊ လပွတ္တာနဲ့ ဟိုင်းကြီးကျွန်း စတဲ့ဒေသတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လပွတ္တာနယ်အတွင်းမှာဆိုရင် ကြွက်တွေဟာ စပါးပင်အရင်းကနေ ကိုက်ဖြတ်ပစ်တာကြောင့် တချို့လယ်ကွက်တွေဟာ ရိတ်စရာမကျန်အောင်ထိ ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ ဒေသခံတယောက်က အခုလို ပြောပါတယ်။
“ကြွက်တွေ အုပ်လိုက်ပေါ့ စပါးပင်တွေကို ဖျက်တာ။ အခုက ရိတ်သိမ်းချိန် ရောက်ခါနီးမှ တံစဉ်လွတ်တာပေါ့။ ၁၇၅ ဧကက ၁၀၀ နီးပါးလောက်ကို ပျက်တာ။ တနယ်လုံးတော့ မဟုတ်ဘူး။ ပြင်စလူ အပိုင်ဘက်ကပေါ့။ ပြင်စလူပိုင်ဘက်က အတော်များများပျက်တာ။ ကြိုကြား ကြိုကြားပေါ့။ အကုန်လုံးတော့ တပြိုင်နက်တည်း ဖြစ်နေတာတော့ မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။”
လပွတ္တာနယ်အတွင်းက တချို့တောင်သူတွေဟာ မျိုးစပါးမရှိတာ၊ ကျွဲ နွား မရှိတာနဲ့ တခြား အခက်အခဲတွေကြောင့် ဒီနှစ် စပါးမစိုက်နိုင်သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အခြား လပွတ္တာ နယ်ခံတယောက်ကတော့ ပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့ အခြေအနေဟာ အနည်းဆုံး ၁၀ ပုံ ၁ ပုံလောက်တော့ ရှိနိုင်ကြောင်း အခုလို ပြောပါတယ်။
“ကြွက်က ဘယ်လောက်များလဲ မသိဘူး၊ ဧကနည်းတဲ့ လူတွေဆို ၁၄-၅ ဧက တကွင်းတည်းဆိုရင်တော့ ပြတ်သွားနိုင်တယ်။ များတဲ့လူ သူကြားကိုယ်ကြား ညပ်နေတဲ့လူကျတော့ ၄-၅ ဧက၊ ၈ ဧကလောက် များရင် များသလိုပေါ့။ ပျှမ်းမျှ ဆိုရင်တော့ ၁၀ ပုံ ၁ ပုံလောက် ၊ ၁၀ ပုံ ၂ ပုံလောက် ပျက်တာများတယ်။ ဒါက အများတောထဲမှာ ဖြစ်တာ။ ကြားညပ်နေတဲ့လူကျ ပြဿနာ မရှိဘဲနဲ့ ထီးတည်းကြီးသမားကျတော့ အကုန်ဝိုင်းကိုက်တာ။ တချို့ဆိုရင် တစေ့မှ မရဘဲနဲ့ အပင်တွေ အရင်းက နေပြီး ကိုက်ဖြတ်ပစ်လိုက်တာ။”
ဒီလိုဖြစ်တာကတော့ လပွတ္တာမြို့နယ် အောက်ပိုင်းဒေသက ကျေးရွာတွေမှာ အဖြစ်များပြီး ကြွက်တကောင်ကို ၅၀ သား လောက်ကနေ ၇၀ သားလောက်အထိ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခုလို ကြွက်တွေ များပြားတာကြောင့် ဒေသခံ အာဏာပိုင် တွေက တအိမ်ထောင်ကို တပတ် ကြွက် ၅ ကောင်နှုန်း ဖမ်းခိုင်းပြီး မဖမ်းနိုင်သူတွေကို ဒဏ်ရိုက်နေတယ်လို့ လပွတ္တာနယ်ခံ က ဆက်ပြောပါတယ်။
“ကြွက်နှိမ်နင်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လုပ်တာတော့ သီးခြားမရှိဘူး။ ရယကတွေ လိုင်းကနေတော့ တအိမ်ထောင်ကို ကြွက်မြီး ၅ ချောင်း ပေးရမယ် တပတ်ကို၊ အမှန်တော့ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ တပတ်အတွင်းမှာ တအိမ်ထောင်ကို ကြွက် ၅ ကောင် သတ်ပေးပါလို့ ပြောတာ၊ အိမ်တိုင်းကို။ ဒါပေမဲ့ အိမ်တိုင်းဆိုပေမဲ့ ဘယ်သူက စိတ်ဝင်စားမလဲ။ လယ်သမား လယ်တောထဲမှာ ကိုက်တာပဲ၊ ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေက များတယ်။
“မရှိတဲ့သူကလည်း ကြွက် ၅ ကောင် ရအောင်ရှာပြီး ကြွက်မြီးဖြတ်ပြီး ရယကကို ပေးလိုက်တာပေါ့။ တချို့ကျတော့လည်း မရှာတော့ဘူး။ ဒဏ်ငွေရိုက်မယ်။ ၁,၀၀၀ ပေးရမယ်၊ ကြွက်မြီး ၅ ချောင်း မပေးနိုင်ရင် ဆိုတော့ ငွေ ၁,၀၀၀ ပဲ လွယ်လွယ်ကူကူ ပေးတယ်။ ကြွက်ကို နှိမ်နင်းတယ်ဆိုတဲ့ အဆင့်က ရည်ရွယ်ချက် ပျောက်သွားပြီးတော့ ကြွက်နှိမ်နင်းတဲ့ အဆင့် မရောက်တော့ဘူးပေါ့။”
တချို့နယ်တွေမှာတော့ တအိမ်ထောင် တပတ်ကို ကြွက်မြီး ၂၀ ပေးခိုင်းနေပြီး မပေးနိုင်ရင် ကြွက်မြီးတချောင်းကို ငွေ ၂၀၀ ကျပ်နှုန်း ဒဏ်ရိုက်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဘိုကလေးနယ်ခံ တယောက်ကလည်း သူတို့ဒေသတွင်း ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေကို အခုလို ပြောပါတယ်။
“အခုကလည်း စပါးက ပေါ်လုပေါ်ခင်ပေါ့နော်။ ကြွက်အုပ် ကျသွားပြီဆိုရင် လယ်တွေက ဘယ်လောက်ထိ ပျက်စီးလဲဆိုရင် လယ် ၁၀ ဧကဆိုရင် နောက်နေ့ မနက်မိုးလင်းရင် ၂ ဧကလောက်က လုံးဝကုန်သွားတာပေါ့နော်။ အခုက ကျေးရွာ ရယက တွေ၊ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း ပေါ်လစီတခုက ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ တအိမ်ထောင်ကို ၇ ရက် တပတ်ကို ကြွက်မြီး ၁၀ ချောင်း ပေးရမယ်ပေါ့။
“လယ်သမားတွေက မပေးနိုင်ရင် ပိုက်ဆံပေးရတယ်ဗျ။ တအိမ်ထောင် ပိုက်ဆံ ၁,၀၀၀ ပေးရတာတို့ ဘာတို့ အဲလိုမျိုးတွေ ရှိတယ်။ အဲတော့ ကျနော်တို့ ဒီဘက်ကနေပြီး ကြွက်မြီး သွားရောင်းစားတဲ့လူတောင် ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ဒေသနားက ရွာတရွာက လူတယောက်ဆိုရင် ကြွက်မြီးတွေကို ဖြတ်ပြီး အဲဒီ အောက်မှာ သွားရောင်းတာ ၇၀,၀၀၀၊ ၈၀,၀၀၀ လောက် ရတယ် ပြောတာပဲ။ သူ ဘယ်လိုရောင်းခဲ့ရတယ်တော့ မသိဘူး။”
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ပြီးစကတော့ ကြွက်တွေနဲ့ ငှက်တွေပါ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရပြီး အခုအခါမှ ကြွက်တွေ ပေါများလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ပေါများလာတာကတော့ ကြွက်တွေကို ဖမ်းယူစားသောက်တဲ့ မြွေနဲ့ ဇီးကွက်လို အကောင်တွေ နည်းပါးသွားတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ မြန်မာပြည် အထက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်က ပူတာအို၊ အင်ဂျန်ယန်၊ ဆွမ်ပရာဘွမ်နဲ့ ခေါင်လန်ဖူး စတဲ့ ဒေသတွေမှာ ကြွက်နဲ့ စပါးဖျက်ပိုးတွေ ကျရောက်နေတာကြောင့် ဒေသခံတွေ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ် လို့ ပူတာအို ဒေသခံတယောက်က ပြောပါတယ်။
ဒီလို ရိက္ခာအခက်အခဲ ကြုံနေရတာဟာ အနည်းဆုံး ရွာပေါင်း ၇၇ ရွာ၊ လူဦးရေ ၁၀,၀၀၀ လောက် ရှိမယ်လို့ ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့တခုက ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) က တာဝန်ရှိသူ တယောက် ကတော့ သူတို့နဲ့ မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်က ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ကချင်ပြည်သူတွေကို ဆန်နဲ့ ဆေးဝါးတွေ ပို့ဆောင် ပေးထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းကလည်း ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မတူပီ၊ မင်းတပ်နယ်တွေမှာ ၀ါးတွေပွင့်ပြီး ကြွက်တွေ များပြားခဲ့တာ ကြောင့် ဒေသခံပြည်သူတွေ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲနဲ့ တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။
သတင်းတွေ သတင်းတွေ ဖတ်လိုက် ကြားလိုက် မြင်လိုက်တာနဲ့ စိတ်ချမ်းသာစရာတစ်ကွက်မှ မမြင်ဘူး သတင်းတွေကို ကြာတော့ မဖတ်ချင် မကြားချင် မမြင်ချင်တော့လောက်အောင်ကို စိတ်ထဲက ခံစားလာရတယ်။ အဲ့ထဲကမှ မနေ့က ထူးထူးဆန်းဆန်း သတင်းလေးတစ်ခုကို ဖတ်မိတော့ မပြုံးပဲ ၀ါးလုံးကွဲရယ်မိပါတော့တယ်။ နောက် ကြံကြံဖန်ဖန် ရွှေညဏ်တော်စူးရောက်တဲ့ ညဏ်ကြီးရှင်တွေရဲ့ ဦးနှောက်ကိုလဲ ရွှေချချင်စိတ် ပေါက်မိပါတယ်။
ကြွက်မြီး ၁၀ချောင်း သို့မဟုတ် ဒဏ်ငွေ နှစ်ထောင်ကျပ်တဲ့လေ အခုလိုမျိုး စနစ်တကျ တိုက်ကွက်ဆင်ပြီး ကြွက် အမြစ်ဖြုတ်ရေး အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ကြွက်မြီး စစ်ဆင်ရေးစီမံချက်ကို ရယ်ချင်ပက်ကျိဖြစ်စွာ အံ့မခန်း သိလိုက်ရပါတယ်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ဧရာဝတီတိုင်း လပွတ္တ္ဘာမို့ထဲက ကျေးရွာတွေမှာ ကြွက်တွေ သောင်းကျန်းလို့ မိုးစပါးတွေ ပျက်စီးဆုံးရူံးရလို့ တောင်သူဦးကြီးတွေမှာ စိတ်သောကရောက်ရတဲ့အထဲက ကိုရွှေအာဏာပိုင်တွေက ကြွက်နှိမ်နှင်းရေး စီမံချက်အဖြစ်နဲ့ တခမ်းတနား ကြော်ငြာချက်ထုတ်လိုက်ပုံက တစ်အိမ်ထောင်ကို ကြွက်မြီး ၁၀ချောင်း နူန်းနဲ့ ကျေးရွာ အာဏာပိုင်တွေဆီကို လာရောက်အပ်နှံရမယ်လို့ အမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကြွက်မြီး၁၀ချောင်းမအပ်နိုင်ရင် ဒဏ်ငွေ နှစ်ထောင်ကျပ် ပေးဆောင်ရမယ်လို့ လပွတ္တာ ပြင်စလူ အုတ်တွင်း သရက်ကုန်း သာလိကာကုန်းစတဲ့ ကျေးရွာအုပ်စုတွေမှာ ဒေသခံအာဏာကိုင်တွေက ခပ်တည်တည်နဲ့ အမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
စပါးစိုက်မရလို့ စိတ်ပိန်နေရတဲ့အထဲ အခုလိုမျိုးကြွက်မြီးစစ်ဆင်ရေးလုပ်ခိုင်းတာဟာ တကယ်တမ်း ကြွက်နှိမ်နှင်းရေးအတွက် မထိရောက်ဘူးလို့ ဒေသခံလယ်သမားဦးကြီးက ပြောပါတယ်။ လယ်ထဲကို ကြွက်တွေက တပ်စိတ်လိုက် အုံလိုက် ကျင်းလိုက် လာလာပြီး စပါးတွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အတွက် လယ်တွေအကြီးအကျယ် ပျက်လို့ လယ်သမားတွေ စိတ်ဆင်းရဲနေကြပါတယ်။
အခုလိုမျိုး နာဂစ်ဒေသမှာ ကြွက်တွေ သောင်းကျန်းနေတာဟာ နာဂစ်ဖြစ်တုန်းက လူသေအလောင်းတွေ ကျွဲနွားအလောင်းတွေ စနစ်တကျ သေသေချာချာ မမြုတ်နှံနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် တူးဖော်စားသောက်ရာကနေ ရာထောင်ချီပြီး ကြွက်မျိုးပွားလာရတယ်ဖြစ်တယ်လို့လဲ ပြောပါတယ်။ အခုချိန်အထိလည်း အရိုးကျနေတဲ့ အရိုးအပိုင်းအစတွေ အ၀တ်စတွေက လယ်ကွင်းတွေထဲမှာ ရှိနေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ နာဂစ်ဒေသမှာ ကြွက်ကျလို့ တခြား ကြွက်ကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ရောဂါတွေအတွက် ကြိုတင်တွေးပြီး စိတ်ညစ်နေကြရတဲ့အထဲ ကြွက်မြီးဖြတ်ခိုင်းနေတဲ့အတွက် ခလေးလူကြီး ပါမကျန် ကြွက်ဖမ်းဆီးရေးအတွက် ထောင်ချောက်ဆင်ပြီး ကြွက်မြီးဖြတ်နိုင်ရေး လယ်ကွက်တွင်း စစ်ဆင်ရေးဆင်းဖို့ ပြင်ဆင်နေရတဲ့အတွက် စပါးပြန်စိုက်နိုင်ဖို့ မိသားစု စားဖို့အတွက် ပိုက်ဆံရှာဖို့ အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။
မဆုမွန် စဉ်းစားတာတော့ စီးပွားရေးသမား ဂွင်ဆင်ပြီး ကြွက်မြီးဆယ်ချောင်း ဒဏ်ငွေနှစ်ထောင်ဆိုတော့ ကြွက်မြီးတစ်ချောင်းကိုအနည်းဆုံး တစ်ရာ ငါးဆယ်နူန်းနဲ့များ လိုက်ရောင်းနေတဲ့ စီးပွားရေးဈေးကွက် ကြီး နာဂစ်ဒေသမှာ ဖြစ်လာလေမလားလို့ တွေးရင် ညဏ်ကြီးရှင်တွေရဲ့ ကြွက်မြီးစစ်ဆင်ရေးစီမံချက်အတွက် ရယ်ရမလို ပြုံးရမလို ဖြစ်မိပါတယ်ရှင်။
မွေးတဲ့နေ့ က အရေးမကြီးဘူးအမေ..မသေဖို့ က အရေးကြီးတယ်။
ကျနော့ မွေးနေ့ ရောက်ပြန်ပြီလား အမေ
ကျနော် မင်းကိုနိုင် က ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီနေရာက သားဦးချ ကန်တော့လိုက်ပါတယ်။
သေတနေ့ မွေးတနေ့ ..
ဘယ်လောက်နံပတ် နဲ့အသက်
ထွန်းရမဲ့ ဖယောင်းတိုင် အရေအတွက်
ထောင်ထမင်းနဲ့ ဘဲ အသက်ဆက်တယ်.။
ကျနော် ရှက်တယ် အမေ..
သေတဲ့နေ့မရောက်သေးဖို့ ဘဲအရေးကြီးတယ်။
ပျော်ရွှင်မွေးနေ့ ပါ ကိုမင်းကိုနိုင်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 10:40 PM0comments
စောင့်နေမှာပါ သားရယ် မကြာပါဖူး..ထောင် (၁၀၄) နှစ်
သားလေး မောင်ဘိုဘို (သို့ မဟုတ်) ဘိုမင်းယုကို
တရံမလပ် အမေ သတိရနေတယ်..
မောင်နှမ သုံးယောက်နဲ့ အမေအိုဘ၀
မိသားစုရဲ့ ၀မ်းစာ ဆင်းရဲတွင်းနက်တဲ့ အခါ
လုပ်ကျွေးခဲ့တာ အမေ သာဓုခေါ်ပါတယ်။
သူယုံကြည်ရာ တောင်းဆို ရုန်းကန်ခဲ့တာ အပြစ်တဲ့လား.
တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက် သိခဲ့တဲ့အခါ..
၂၀၀၈ ရွှေဝါရောင် နှစ်ပတ်လည်စမဲ့အချိန်
နေပြည်တော်ဘူတာမှာ ဖမ်းဆီး ခံရ
ကြားမယုံနိုင်စရာ..ထောင် ၁၀၄ နှစ်တဲ့..
မဆလခေတ် ကြိုးဒဏ်ကျ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်
ဆလိုင်း ကိုတင်မောင်ဦးက လွဲရင်
နအဖ ရဲ့ အမုန်းခံရဆုံး..တရားခံပါ။
မန္တလေးအိုးဘိုထောင်မှ တဆင့် သရက်ထောင်
ထောင်တွင်းမှာ နှိပ်စက် ဦးခေါင်းဒဏ်ရာ
အပြင်းဖျားလို့ ခေါင်းကိုက် ဝေဒနာ
အသက် ၂၂ နှစ် ဘဲရှိပေမဲ့
ဘုရား..ဘုရား သက်ဝင်းအောင်လို ဘ၀မဆုံးပါစေနဲ့
အမေ့အတွက် ရင်မလေးနဲ့ ..
အချိန်ကျရင် ဘယ်လောက် တော်ပစေ..
မသဒ္ဓါ ( ၁၀။၁၉။၂၀၀၉)
အမည်။ ။ ကိုဗိုလ်မင်းယုကို(ခ)ဘိုဘို
ထောင်ဒဏ်။ ။ (၁၀၄)နှစ်
အသက်။ ။ (၂၁)နှစ်
မိဘအမည်။ ။ ဦးအောင်ဆန်းလင်း(ကွယ်လွန်)၊ ဒေါ်သန်းမြင့်။
အဖမ်းခံရသည့်နေ့။ ။ (၁၆၊ ၉၊ ၂၀၀၈) ညပိုင်း(၁၀)နာရီ
ပညာအရည်အချင်း။ ။ (၁၀)တန်း (ပြင်ပမှ ဖြေဆိုဆဲ)
နေရပ်လိပ်စာ။ ။အကွက်(၅၀၂ ) သီတာအေးရပ်ကွက်၊ မေဇင်သိန်း
အိမ်ယာ၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
ဗကသအဖွဲ့ဝင်“ကိုဗိုလ်မင်းယုကို” အား ထောင်ဒဏ်(၁၀၄)နှစ်ချမှတ်
ရေးသူ..ညွန့်သက်ထားဦး (Freedom News Group)
အထက်ဗမာပြည်(မန္တလေး)ဗကသ လူငယ်ကျောင်းသား ကိုဗိုလ်မင်းယုကို အားအမှုပေါင်း(၄၀)ဖြင့် စွဲချက် တင်၍ ဒီဇင်ဘာလ(၁၆)ရက်နေ့က မန္တလေး အိုးဘိုထောင်တွင်းတရားရုံးတွင်ရှေ့နေမပါဘဲ တဖက်သတ် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်(၁၀၄)နှစ်ချမှတ်ခဲ့သည်။
ကိုဗိုလ်မင်းယုကို သည် အမေတခုသားတခုဘ၀ဖြင့် စီးပွားရေးချို့တဲ့စွာ ရုန်းကန်နေရင်း အထက်ဗမာပြည် ကျောင်းသားအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ကျောင်းသားထုအခွင့်အရေးနှင့် လူမှုရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကိုဗိုလ်မင်းယုကို အား ယခုလို နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်(၁၀၄)နှစ် ချမှတ် လိုက်ခြင်းမှာ ကျောင်းသားထုအခွင့်အရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် တရားဥပဒေကို နအဖစစ်အစိုးရမှ ပြောင်ပြောင် တင်းတင်း ချိုးဖောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုလို လူငယ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်အပေါ် ချမှတ်သည့်ပြစ်ဒဏ် သည် မည်သည့်နိုင်ငံတကာတရားစီရင်ရေးစနစ်တွင်မှ မတွေ့ရနိုင်သည့် ဖြစ်ရပ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ မဆလခေတ် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုတင်မောင်ဦးအား သေဒဏ်ပေး သည့်ဖြစ် ရပ်ပြီးလျှင် ယခု ကိုဗိုလ်မင်းယုကို ကို ချမှတ်လိုက်သည့် ပြစ်ဒဏ်သည် မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသား သမိုင်းတွင် ဒုတိယမြောက်အကြီးမားဆုံးဖြစ်သည်။
ဗကသ အထက်ဗမာပြည်(မန္တလေး) အဖွဲ့ဝင် ကျောင်းသား ကိုညီညီအားလည်း မန္တလေးထောင်တွင်း တရားရုံးကပင် ထောင်ဒဏ်နှစ်(၅၀)ချလိုက်ပါသည်။
နအဖစစ်အစိုးရက ကိုဗိုလ်မင်းယုကို အပါအ၀င် ဗကသလူငယ်မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားများကို တရား လက်လွတ် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များချမှတ်နေခြင်းမှာ အစဉ်အလာ ကြီးမားသော ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်(ဗကသ)အား အငြိုးအတေးကြီးစွာဖြင့် ချေမှုန်းနေခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟု တိမ်းရှောင်နေရသောဗကသ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးက Freedom News Group သို့ပြောပြသည်။
Freedom News Group မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 11:02 AM0comments
၂၀၀၅ မေလ (၁) ရက်ကပေါ့..
မိသားစု ကို အကြောင်းကြားသူမရှိ.
ပူပြင်းရင်နဲ့ချစ်ဇနီးသည်နှင်းစန္ဒာ.
စုံနံ့ သာမြိုင် လင်ပျောက်ရှာဆဲ..
(၁၀) ရက်မြောက်တဲ့နေ့ ..
စစ်ခွေးသား မင်းလှိုင်က အကြောင်းကြားတယ်.
“ကိုအောင်လှိုင်ဝင်း အသက် (၃၀)
စစ်ကြောရေးမှာ မေလ (ရ)ရက်က
နှလုံးရောဂါ ဝေဒနာနဲ့ ကွယ်လွန်တယ်။
ကောင်းမွန်စွာ မီးသင်္ဂြိုလ်ပြီးပြီ။”
“ရော့.. ရက်လည် ဆွမ်းကြွေးရန်
ကျန်ခဲ့တဲ့ ညီမလေးတို့ မိသားစုကို..
ဘယ်သူမှ မပြောနဲ့ ..ရဲလည်းမတိုင်နဲ့ ”
ဒေါ်လာတစ်ရာ ငွေတစ်သိန်းဘဲ တန်ရမလား..
“ဟင့်အင်း ကျမ ငွေမလိုချင်…
သေတာတောင် မိသားစု မသိရ..
ကျမ မုဆိုးမ..လင့်မျက်နှာလေးတောင်မတွေ့ ရ
သက်ပျောက်မြေချ ဆွမ်း မကပ်ရ
လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၀) ရက်က အကောင်းပကတိ
အသက် (၃၀) ဘာရောဂါမှမရှိဘူး..
၀ရမ်းမရှိ ဖမ်း.။ မိသားစုကို အကြောင်းမကြား
သဘာဝ ရောဂါနဲ့ လူသေ
ဒါ ရဲနဲ့မဆိုင်ဘူး..မရမ်းကုန်းရဲက ညင်းတယ်။
" အတွင်းကြေ ပြင်းထန်ရိုက်ချက်
စစ်ကြောရေး အမှတ် (၁)က ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းလှိုင်။
တနေ့ မှာ တူသောအကျိုးပြန်ဖြစ်စေရမယ်။
နအဖ လက်အောက်က လူဘ၀
သင်လည်း..တနေ့ နေ့ တခါခါ
တော်လှန်ရေး လမ်းကြောင်း ပေါ်ရပ်..
Statement on the murder Ko Aung Hlaing Win, member of NLD
(1) Ko Aung Hlaing Win, who isamember of National League For Democracy was arrested on May 1, 2005 by an unknown group of men who were assumed to be soldiers. However, no one knew where he was taken. On May 10, 2005 the commander of an interrogation centre, Lt Col
Min Naing, came to his family and informed them that Ko Aung Hlaing Win died on May 7, 2005 due toaheart attack, and tried to give his family 100,000 kyats in Burmese currency to use for the prayer ceremony. Ko Aung Hlaing Win's family refused to take that money.
(2) As soon as the family learnt that their loved one had passed away, they published an announcement. In this announcement the family said, “Ko Aung Hlaing Win
passed away unexpectedly, or because of an unknown reason”. But the authorities forced them to change the words into “Ko Aung Hlaing Win passed away because of general diseases”.
(3) We see the following facts in the case:
- Ko Aung Hlaing was arrested without warrant
- The authorities didn’t inform the family why they arrested him and where he was brought
- He was tortured to death during the investigation
- The authorities destroyed the dead body of Ko Aung Hlaing Win without informing
- Misuse of power for concealing the true facts of the case
- Threatening and persuading the family not to speak out by giving themasmall amount
(4) The above factors prove that the junta in Burma breaks the law, although they declare that “no one is above the law”. Moreover, they don’t abide international laws. The worst is that there are no international or internal laws which allow the destroying of the dead body without prior medical examination or without the knowledge of the family. The case occurred not in the battle area but in the capital of Burma. This information attests to the fact that the junta committedacrime.
(5) Therefore, Burmese people are living under appalling conditions under the current military regime.
(6) Therefore, we demand the Senior General Than Shwe’s administration stop such kinds of murder during investigations, brings the perpetuators of such crimes to trial, and explains the cases to the public.
(7) We also request that International governments, international jurist organizations and human rights organizations, including Amnesty International, condemn the junta for its murdering of activists, and puts pressure on Mr. Paul Segio Pinheiro, UN Special Rapporteur on Burma, to set up an independent inquiry into the murder of Ko Aung Hlaing Win.
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:23 PM 1 comments
ဂဋ္ဋုန် မင်းတို့ ၏ တိုက်ပွဲခေါ်သံ
ကျုပ် အောင်လံသား ဗျ
ဖုန်းဆိုးတောကို ဒါးမတိုနဲ့ ခုတ်..
ဒီမြေမှာ ကျုပ် ဘိုးဘွား ခေါင်းချတယ်။
တင်တောင်းခဲ့တဲ့ ဒီမင်္ဂလာ ယာမြေ။
သူလုပ်တာ ဘာသောက်ဖြစ်မှ မရှိ။
မိုးခေါင်ရေရှား ခြောက်သွေ့ ဒေသ..
၀ါ နှမ်း ပြောင်း ပဲ..ရေနည်းကြိုက်သီးနှံ ဖြစ်ထွန်းတဲ့မြေဗျ။
ပင်ဂွင်းကို ရေခဲတိုက်ထဲ မွေးတဲ့အစိုးရမင်း လက်ထက်မှ
ကျုပ်တို့ လယ်တွေ ချစ်တီးလိုသိမ်း ကြံစိုက်ကွက်
ဒါးကြောက် လို့ စိုက်တဲ့ကြံ.
ရလိမ့် မဲ့ ဒီသကြား..
တောမှာတောင် သွားပြောလို့ မရတဲ့စကား။
ကျုပ်တို့ဟင်းလျှာ ဆီမရှိ.
ဟင်းရွက် ရေလုံပြုတ်သာ နတ်သဓါအတိ
လူရော နွားရော ဆင်းရဲအတိ။
စားကျက်တော၊ ရွာထောင်၊ ဆာပါ၊ စမ်းကလေး၊
ကျောင်းစု၊ ရွာမစု၊ ရေတွင်းစု ကျေးရွာများက တောင်သူ ၇ဝ
မြို့လှရွာသား ၅၇ ဦး ပေါ့..လယ်တွေ စစ်တပ်သိမ်း.တော့
ဒါကြောင့် အိုင်အယ်လ်အို ကို တိုင်မိတယ်။
တိုင်ပေးတဲ့ ရှေ့ နေ ကိုဖိုးဖြူ..ထောင် ၄နှစ်
အောင်လံNLD ဒု ဥက္ကဌ ဦးအေးမြင့် ထောင် ၂ နှစ်.
ကျူပ်တို့ ကို ကူညီလို့ တဲ့ဗျာ..
နအဖ က ကောင်းပြီ ကောင်းရက်..
၂၀၀၉ ခုနှစ် မတ်လက..
ဒီလယ်ယာတွေကို လယ်သမားတွေ ပြန်ပြီးပိုင်စေ ဆိုလို့ 
နှမ်းနဲ့ ပဲတီစိမ်း ပင်စိမ်းလွင့်လွင့်..
ပုဒ်မ (၄၄၇) နဲ့ ကိုယ့်လယ်ပေါ် ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှု တဲ့
အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၄ နှစ်ကျော်.
တချိူ့ ဆို တမိသားစုလုံး..ထောင်ကျ
၈၀ ကျော်လောက် ပိန်တုန်ချိအမယ်ကြီး
ကျူပ်ခွေးငနီ နဲ့ ကျူပ်နွား ငညို .
အစာငတ် သေကုန်တော့ မှာဘဲ။
နအဖ နဲ့ကျမှ ရှိတာပြောင်တယ်။
သောက်ကျိုးနည်း တော်လိုက်တဲ့ ဒီဘုရင်.
သူခိုး ဒါးပြဘုရင် တက်ဖြစ်တာက ဆိုးပါ့။
တောင်သူကြီးမင်းလို သခွါးသီးခိုးတဲ့ ဒီဘုရင်
ပဲနှမ်း ပြောင်းရောင်း ဒေါ်လာရ.
အောက်က နင်းပြားတွေ ကတော့ သေတော့မယ်။
ဆရာစံ လို တော်လှန်ရေးစကြမှ ဖြစ်မယ်။
လယ်သမား သွေးနီတာ ပြစို့ ရဲ့။
တွန်ကြစို့ဒို့ ဂဋ္ဋုန်.
ကိုယ့်မြေကိုယ်ထွန်သူ ၁၂ ဦး ထောင်ကျ 16 October 2009
မကွေးတိုင်း အောင်လံမြို့နယ်မှာ ကိုယ့်လယ်ယာမြေတွေ အသိမ်းခံရတဲ့အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ (ILO) ကို လယ်သမားတွေက တိုင်ကြားခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက် သူတို့ရဲ့ လယ်ယာမြေတွေကို ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူတို့ပြန်ရထားတဲ့ လယ်ယ်ာမြေတွေအပေါ်မှာ လယ်စိုက်ဖို့ ယာစိုက်ဖို့ ပြန်လုပ်ကြတဲ့အခါမှာတော့ ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှုနဲ့ အဲဒီလယ်သမားတွေကို တရားစွဲပြီး ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်တွေ ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ဘန်ကောက်မြို့ကနေ ကိုသိန်းထိုက်ဦးက ဆက်သွယ်စုံစမ်းပြီး အစီရင်ခံထားပါတယ်။
မြေအသိမ်းခံခဲ့ရလို့ အိုင်အယ်လ်အို ကို တိုင်ကြားခဲ့ဖူးတဲ့ အောင်လံမြို့နယ် စမ်းကလေးရွာက လယ်သမားတွေ၊ အခုတော့ သူတို့ တခါက ပိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ လယ်မြေထဲမှာ နှမ်းနဲ့ ပဲနီစိမ်းတွေ စိုက်မိလို့ ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှုန့ တရားရုံးက ထောင်ဒဏ်ပစ်ဒဏ်တွေ အသီးသီး ချမှတ်လိုက်တာပါ။ ဒီလို ထောင်ဒဏ်တွေ ချမှတ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ အောင်လံမြို့ခံ တယောက်က အခုလို ပြောပါတယ်။
"ကိုသန်းစိုး၊ သူက အလုပ်ကြမ်းတွေပါ ပါတယ်နော်။ သူ့ကို ၁ နှစ်၊ ပြီးတော့ မောင်သတ်က ၉ လ၊ ကိုမြင့်သိန်းက ၂ နှစ်နဲ့ ၃ လ၊ မအေးဝင်းက ၄ နှစ် ၉ လ၊ မောင်မျိုးက ၉ လ၊ ကိုသိန်းဝင်းက ၂ နှစ် ၃ လ၊ ကိုသိန်းထွန်းက ၂ နှစ် ၃ လ၊ ကိုနိုင်စိုးက ၂ နှစ် ၃ လ၊ ကိုထွန်းကြည်က ၂ နှစ် ၃ လ။ ပြီးတော့ ကိုစိုးမြင့် ၃ လ၊ ကိုဝင်းနိုင်ဦး ၂ နှစ် ၃ လ၊ မမိမာ ၂ နှစ် ၃ လ။ အဲဒီမှာ ကိုသန်းစိုးတို့က သားအဖ သုံးယောက်ပေါ့နော်။ ကိုသန်းစိုး ရယ်၊ ကိုသတ် ရယ်၊ ကိုမျိုး ရယ်က သားအဖ သုံးယောက်။ နောက်ပြီးတော့ မအေးဝင်းကလည်း လင်မယား နှစ်ယောက်ပေါ့နော်။ သူ့ယောက်ျား ရယ်၊ ပြီးတော့ ညီမ ရယ်။"
၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ အောင်လံမြို့နယ် စမ်းကလေး ကျောင်းစုအတွင်း လယ်သမားတွေရဲ့ ဘိုးဘွားဘီဘင်ပိုင် လယ်မြေဧက ၅၀ ကျော်ကို အောင်လံမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်တွေရဲ့ စီမံချက်တခုဖြစ်တဲ့ MEC သကြားစက် အမှတ် (၅)က သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို သိမ်းယူခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လယ်သမားတွေက သက် ဆိုင်ရာ အစိုးရ အရာရှိတွေနဲ့ အိုင်အယ်လ်အို အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်ကို တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မတ် လ အတွင်း နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ အလုပ်သမားရေး ၀န်ကြီးဌာနနဲ့၊ အိုင်အယ်လ်အို အရာရှိတွေ ဒီ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ လာရောက် စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ဒီလယ်ယာတွေကို လယ်သမားတွေ ပြန်ပြီးပိုင်စေ ဆိုတဲ့ နုတ်မိန့်နဲ့ ပြန်ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို မိသားစုဝင်တွေနဲ့ မြို့ခံတွေက အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
"(၄၄၇) နဲ့ တရားစွဲတာ ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှုပေါ့။ သူတို့အခင်းကို ပြန်သိမ်းလို့။ ၄ လပိုင်း မတိုင်ခင်တုန်းကလေ သူတို့ ၀န်ကြီးတွေနဲ့ ဒီမှာ လာစကားပြောတဲ့အခါကျတော့ ပြန်ပေးတယ်ပေါ့နော်။ နုတ်မိန့်နဲ့ ပြန်ပေး သွားတယ်ပေါ့နော်။"
"၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ သိမ်းတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် သူတို့ အိုင်အယ်လ်အိုမှာ တိုင်ထားတယ်။ အဲဒါ အိုင်အယ်လ်အို အရာရှိရော၊ နေပြည်တော် ၀န်ကြီးဌာနက ဗိုလ်မှူးကြီး လွင်အောင် ရော၊ အားလုံး မယက ရော၊ ရယက ရောပေါ့နော်။ အားလုံး အစုံအလင်ရှေ့မှာ - ခင်ဗျားတို့ ယာမြေတွေ ဟုတ်ပါသလား။ ဘယ်သူက ဘယ်နှစ်ဧက တုန်း ဆိုပြီး မေးတဲ့အခါမှာ သူတို့က ဧကတွေ ပြောပြတဲ့အခါကျတော့ ဒါ မှန်ကန်တယ်။ ဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့ လယ် ခင်ဗျားတို့ ယာကို လွတ်လပ်စွာ လုပ်စားပေါ့နော်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်စား စိုက်စား ဆိုပြီး ဗိုလ်မှူးကြီး လွင်အောင် က နုတ်မိန့်နဲ့ ပေးခဲ့တယ်။ နုတ်မိန့်နဲ့ ပေးခဲ့တဲ့ဟာမှာ ယာသမားတွေက ယာဆင်း လုပ်တာပေါ့။ ဒီ့ အရင်တုန်းကလည်း ယာသမားတွေက ယာပဲလုပ်စားတာ။ အဲဒါကို လယ်ယာဌာနက တရားစွဲ တယ်။ သူတို့မြေကို ဒီတောင်သူတွေက ကျူးကျော်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ တရားစွဲတယ်။ တရားစွဲပြီးတော့ ခုတော့ နေ့လယ် ၁ နာရီမှာ ထောင်ချလိုက်တယ်လေ။ အခု သရက် ကို ပို့လိုက်ပြီ။"
အခုတော့ လယ်သမားတွေကို ဖမ်းဆီးပြီး သရက် ထောင်ကို ပို့လိုက်ပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ မိုးဦးကျမှာ လယ်သ မား တွေက သူတို့မြေတွေကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ရပြီဆိုပြီး ထယ်ရေးပြင်ပြီး နှမ်းနဲပဲနီစိမ်းတွေ စိုက်ခဲ့တာပါ။ ဒါ ကြောင့်လည်း ပိုင်နက် ကျူးလွန်တယ် ဆိုပြီး အောင်လံမြို့နယ် အာဏာပိုင်တွေရဲ့ စီမံချက်ဖြစ်တဲ့ သကြား စက်က ပြန်တရားစွဲခဲ့ပြီး အခုတော့ ဒီနေ့နေ့ခင်းပိုင်းမှာ သူတို့ကို အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ်တွေ ပြစ်ဒဏ်ချ မှတ် လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ထောင်ဒဏ်တွေ ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက် ကျန်ရစ်တဲ့ မိသားစုတွေရဲ့ အခြေအနေကိုလည်း လယ်သမား တွေရဲ့ မိသားစုဝင်တယောက်က အခုလို ပြောပါတယ်။
"အခုတော့ အိမ်မှာ အိမ်ထောင်ဦးစီးတွေ လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့လူတွေချည်းပဲ ချလိုက်တာ ဆိုတော့ အိမ်ကလူတွေ အကုန်လုံး ဒုက္ခရောက်ကုန်တာပေါ့။ လှည်းတွေရော နွားတွေရော။ အခုဆို စိုက်ပျိုးပြီးခါစပဲ ရှိသေးတယ်လေ။ အခု နောက်ပိုင်းမှာ ရိတ်သိမ်းဖို့ရော အလုပ်တွေကတော့ အများကြီးပေါ့။ အဲဒါ ဘာမှ မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလေ။ အဲဒါ ခုတော့ မအေးဝင်း ဆိုရင်လည်း ၄ နှစ်နဲ့ ၉ လ၊ သူဆိုလို့ရှိရင် သူ့ယောက်ျားရော သူ့ညီမလေးရော။ ညီမလေးကဆို ကျပ်မပြည့်ဘူးလေ။ အခု ညီမလေးရော၊ သူ့ယောက်ျားရော ဆိုတော့ အိမ်မှာ ကလေး နှစ်ယောက်နဲ့ အဘွားကြီး ၈၀ ကျော်လောက် အမေအိုကြီးပဲ ကျန်ခဲ့တော့တယ်။ ကြည့်မယ့်သူမရှိတော့ ဒီအတိုင်းပဲ ထားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ နွားတွေလှည်းတွေလည်း ကြည့်မယ်သူ မရှိဘူးပေါ့။"
အိုင်အယ်လ်အို အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်ကြီးနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရအကြား သဘောတူညီချက် အရ အဓမ္မလုပ်အားပေး ခိုင်းစေမှုတွေ အတင်းအကျပ် မြေယာသိမ်းမှုတွေကို လယ်သမားတွေဘက်က တိုင်ကြား ခွင့်ရှိပြီး ဒီလို တိုင်ကြားသူတွေကို စစ်အစိုးရဘက်က လက်တုံ့ပြန် အရေးမယူပါဘူးလို့ သဘောတူထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း စစ်အစိုးရဟာ အိုင်အယ်လ်အိုနဲ့ သဘောတူထားတဲ့ နားလည်မှု သဘောတူညီမှု စာချွန် လွှာတွေအားလုံးကို ပယ်ဖျက်သလို ဖြစ်နေပြီဆိုပြီး ဒေသခံလယ်သမား တယောက်က အခုလို မှတ်ချက်ချ ပါတယ်။
"နေပြည်တော် အစိုးရနဲ့ ကျနော်တို့ အိုင်အယ်လ်အို အဖွဲ့အစည်းနဲ့ သဘောတူစာချွန်လွှာတွေ၊ လက်မှတ်ရေးထိုး ထားတာတွေကို သူတို့ကနေ လွယ်လွယ်လေးနဲ့ ဖောက်ဖျက်တဲ့သဘောလို့ ကျနော် မြင်တယ်ခင်ဗျ။ ခံစားရတာ ပြောရရင်တော့ ဒီတောင်သူလယ်သမားတွေက တနိုင်ငံလုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ တောင် သူလယ်သမားတွေပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့ သီးနှံတွေ စိုက်ပျိုးပေးနေတဲ့ တောင်သူတွေအနေနဲ့ ကိုယ့် လယ်ယာမြေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်မစားရတဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ရောက်နေပြီခင်ဗျ။ ခုတော့ တောင်သူလယ်သမားတွေဟာ၊ အဲဒီထဲမှာ အငှားလိုက်လုပ်တဲ့လူတွေရော၊ စက်အငှားမောင်းတဲ့သူတွေပါ အကုန်လုံးကို မဆိုင်တဲ့သူတွေပါ အကုန်ရောနှောပြီး ထောင်ချပစ်လိုက်တယ်ဗျ။ တော်တော်လေးကို ဒုက္ခ ရောက်နေကြပြီခင်ဗျ။"
အခု ထောင်ဒဏ်ပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ လယ်သမားတွေဟာ စမ်းကလေးရွာက လယ်သမားတွေပါ။ တခြား ကျေးရွာတွေမှာလည်း အလားတူ လယ်ယာသိမ်းခံရတာတွေ ရှိပြီး အဲဒီလယ်သမားတွေက အိုင်အယ်လ်အို ကို တိုင်ကြားထားပါတယ်။ ညံဝိုင်း၊ ရေပေါ်၊ သပြေပင် စတဲ့ကျေးရွာတွေက လယ်ယာတွေလည်း အသိမ်းခံထားရပြီး အဲဒီကျေးရွာတွေက အိုင်အယ်လ်အို ကို တိုင်ကြားထားတဲ့ လယ်သမားတွေကိုလည်း ကြံစက်က ပြန်တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။ သူတို့ကိုလည်း မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ အမိန့်ချမယ်လို့ အောင်လံဒေသခံတွေက ပြောကြပါတယ်။
မကွေးက အစိုးရသိမ်း လယ်တချို့  ILO ကြောင့်ပြန်ရ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အတင်းအဓမ္မ လုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ကြီးကို ဒေသခံတွေက တိုင်းကြားချက်တွေ အပေါ် အိုင်အယ်လ်အို က စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး မြန်မာ စစ်အစိုးရနဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ့် ကာလကို ဒီလ စောစောပိုင်းကပဲ နောက်ထပ် ၁၂လ သက်တမ်း တိုးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ သဘောတူညီချက်အရ တိုင်ကြားသူတွေကို အာဏာပိုင်တွေရဲ့ နှောက်ယှက်ဟန့်တားတွေ တုံ့ပြန် အရေးယူတာတွေ မရှိအောင် အကာအကွယ် ပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာ တကယ့် လက်တွေ့မှာ ထိရောက်မှုရှိပါသလား။ မကွေးးက တိုင်ကြားသူတွေကို ကိုယ်စားပြုခဲ့တဲ့ ရှေ့နေ ဦးဖိုးဖြူကတော့ ထောင်ဒဏ် ၄နှစ် ချမှတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မကွေးတိုင်း အောင်လံမြို့နယ်က လယ်သမားတွေရဲ့ လယ်မြေ အဓမ္မ အသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့ ကိစ္စမှာတော့ အိုင်အယ်လ်အိုရဲ့ ကြားဝင် ဆောင်ရွက်ပေးမှုကြောင့် လယ်သမားတွေ သူတို့ရဲ့ လယ်မြေတွေ ပြန်ရရှိခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ထိုင်းအခြေစိုက် ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် မအေးအေးမာ က အိုင်အယ်အို အရာရှိတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ လယ်သမားတဦးကို မေးမြန်းထားရာမှာ သူက
“ရွာကြီး ၁၀ရွာက တောင်သူလယ်သမားတွေ အိုင်အယ်လ်အို တိုင်ကြားတဲ့အတွက် ၁၁ရက်နေ့မှာ အိုင်အယ်လ်အို အရာရှိ ‘စတိ မာရှယ်’တို့ အောင်လံမြို့ကို ဆင်းလာပါတယ်။ နေပြည်တော်က စစ်ဆေးရေး ဥက္ကဋ္ဌ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ယုလွင်အောင် ပါတယ်။ အောင်လံမြို့နယ် ‘မယက’ မှာ ၁၁ရက်နေ့ မနက် ၉နာရီမှာ ဌာန အစုံကို စစ်ပါတယ်။ ‘မယက’ ကိုလည်း စစ်တယ်။ မြေစာရင်းကိုလည်း စစ်တယ်။ ရေဆင်းကိုလည်း စစ်တယ်၊ ကြံဌာနကိုလည်း စစ်တယ်။ သစ်တောကိုလည်း စစ်တယ်။ နေ့လယ် ၂နာရီခွဲလောက်မှာ သံရွာအုပ်စု ဆန်းကလေး ကျောင်းစုရွာကို ‘စတိ မာရှယ်’ တို့ ၊ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ယုလွင်အောင်တို့ ရောက်လာပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ တောင်သူလယ်သမားတွေကို စစ်ဆေး မေးမြန်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လယ်ယာတွေကို အဓမ္မ ကြံ စိုက်ခိုင်းတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ငြင်းဆန်တဲ့အတွက် အဓမ္မ အသိမ်းခံရတယ်။ ဗိုလ်မှူးကြီး ယုလွင်အောင်က ဒီ လယ်ယာမြေတွေဟာ နိုင်ငံတော် ပိုင်ဖြစ်တယ်လို့ လယ်သမားတွေကို ရှင်းပြတော့ စတိ မာရှယ် က မြေယာဥပဒေအရ နိုင်ငံတော်ပိုင် လယ်ယာမြေဆိုတာကို သဘောပေါက်ပေမဲ့ တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ ဘိုးဘွားပိုင်း လယ်ယာမြေဟာ သူတို့အတွက် အသက် ရှင် ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက်၊ စားဝတ်နေရေးအတွက် စိုက်ပျိုးခွင့်ရှိတယ် မဟုတ်လားလို့ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ယုလွင်အောင်ကို မေးတော့ ရှိပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ လယ်ယာမြေတွေကို ပြန်လုပ်စားပါလို့ နှုတ်မိန့် ပေးခဲ့ပါတယ်။ တောင်သူလယ်သမားတွေကလည်း ပြန်လုပ်စားဖို့ တရားဝင် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။”
အောင်လံမြေစာရင်းဌာနကလည်း လာဘ်ငွေ စားတဲ့အကြောင်း လယ်ဧကတိုးချဲ့တာကို မြေစာရင်းမှာ ပါချင်ရင် ကျပ်ငွေ ၁၀၀၀၀၀ ပေးမှ ရတဲ့ အကြောင်းတွေကိုလည်း တိုင်ကြားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီ့နောက် အိုင်အယ်အို အရာရှိတွေနဲ့ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တွေဟာ လယ်တွေ ဖျက်သိမ်းခံရတဲ့ တည်ပင်အုပ်စု၊ ညောင်ဝိုင်းအုပ်စု ရွာကြီး ၉ရွာက ၀ါ စိုက်တောင်သူတွေက အဓ္ဓမ လုပ်အားပေးခိုင်းမှုနဲ့ ၀ါပင်တွေကို ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ အတွက် တိုင်းကြားခဲ့တဲ့ လယ်သမားတွေဆီကို လည်းသွားခဲ့ပါတယ်။
လယ်သမားတွေ တိုင်ကြားခဲ့တဲ့ အမှုကိုတော့ ၁၂ရက်နေ့မှာ စစ်ဆေးခဲ့ပုံကိုလည်း ဆက် ပြောပြပါတယ်။
“စားဝတ်နေရေးအတွက် စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ၀ါပင်တွေကို ဖျက်ဆီးတာကို တိုင်တန်းပါတယ်။ အဲဒီနေ့မှာ အမှု မပြီးပြတ်သွား ပါဘူး။ အဓမ္မ ခိုင်းစေမှု မြောက်တဲ့အတွက် ဒါကို ဆက်ပြီး စစ်ဆေးပါမယ်။ အောင်လံ လ၀က ရုံးမှာ ၉နာရီ ချိန်းပါတယ်။ တောင်သူလယ်သမားတွေကို စစ်ပါတယ်။ ကျူးလွန်သူ ဗိုလ်မှူးတွေကို အရေးယူပေးပါလို့ တောင်သူလယ်သမားတွေက လည်း တောင်းဆိုပါတယ်။”
ဒီ စစ်ဆေးမေးမြန်းပွဲကိုတော့ လယ်သမား ၄၀၀ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ လယ်သမားတွေရဲ့ လယ်တွေကို ရုံးဆိတ် သကြားစက်က သိမ်းခဲ့တာကတော့ ၂၀၀ရခုနှစ်က ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ခုနှစ်မှာ အိုင်အယ်လ်အိုကို တိုင်ကြားခဲ့ပြီး အခု၂၀၀၉မှာ လယ်တွေ ပြန်လုပ်စားခွင့်ရခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လယ်တွေ သိမ်းခဲ့တဲ့ ဗိုလ်မှုးတွေကတော့ စစ်ဆေးမေးမြန်းခံရပေမဲ့ အရေးယူရတာမျိုးမတွေ့ရဘူးလို့ လယ်သမားတွေက ဆိုပါတယ်။ လယ်သမားတွေဟာ လယ်တွေ သိမ်းခံရတဲ့အတွက် တခြားလယ်တွေမှာ အငှားတွေ လုပ်နေရပြီး စားဝတ်နေရေးအတွက် အခက်အခဲတွေ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ လယ်တွေ ပြန်လုပ်စားခွင့်ရပြီ ဖြစ်တာကြောင့် လယ်တွေကို ပြန်လည် ပြုပြင်ဖို့ လုပ်ငန်းတွေ စတင်တော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
မကွေးတိုင်း အောင်လံ တောင်သူများ အရေး
Apr 11, '08 2:31 AM
စီမံကိန်းဝင် သီးနှံ မစိုက်ပျိုးလို၍ ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်သို့ တိုင်တန်းမှု ပြုလုပ်ခဲ့သော တောင်သူများကို အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက အထူး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနမှ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်မှူးကြီး တင်အောင်ဝင်း ဦးဆောင်ပြီး ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ ပါဝင်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မတီသည် မကွေးတိုင်း အောင်လံမြို့နယ်သို့ ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့တွင် ရောက်ရှိလာပြီး ဦးဆောင် တိုင်ကြားခဲ့သူများကို လူတွေမေးမြန်းခဲ့သည်။
"ကြံစိုက်ဖို့ အဓမ္မ ခိုင်းစေတာကို တောင်သူတွေက မလုပ်နိုင်ဘူး။ ဒီဒေသမှာ အကျိုးမဖြစ်ထွန်းစေဘူး။ ဒါကြောင့် ဆင်းရဲမွဲတေ၊ စီးပွား ပျက်စီးနေတာကို၊ မကျေနပ်မှုတွေကို ILO ကို တိုင်ကြားတဲ့အတွက် ILO က လာပြီး စစ်ဆေးတယ်။ စစ်ဆေးပြီး နအဖ ကို အကြောင်းကြား တယ်။ အခု နအဖ ကနေပြီးတော့ လာစစ်ဆေးတာ" ဟု ILO သို့ တိုင်ကြားခဲ့သူ ဒေသခံတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
၅ ဦးပါ ကော်မတီတွင် ဗိုလ်မှူးကြီး တင်အောင်ဝင်းက ဥက္ကဋ္ဌ ၊ အောင်လံမြို့အပိုင် သရက်ခရိုင် ခယက ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ဝင်း၊ ခရိုင်တရားသူကြီး ဒေါ်ခင်ခင်ချို၊ ဒုတိယ ခရိုင်တရားသူကြီး ဒေါ်သဇင်ရွှေနှင့် မြို့နယ်တရားသူကြီး ဦးလှမိုး တို့ပါဝင်သည်။
တောင်သူ ၁၂၇ ယောက် ကိုယ်စား တိုင်ကြားခဲ့သူ ကိုသန်းစိုး၊ ကိုစိုးမြင့်၊ မအေးအေးဝင်းတို့အား ၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မတီက စာဖြင့် ဆင့်ခေါ်၍ စစ်ဆေးခဲ့သည်။
"အမှုမှန် ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဆင်းလာတယ်လို့ မြင်ပေမယ့် ခယက ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ စစ်ဆေးမေးမြန်းချက်တွေ၊ ကျနော်တို့အပေါ် ဆက်ဆံပုံတွေဟာ ဗိုလ်မှူး ရဲနိုင်ရဲ့ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေလိုမျိုး ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ ဒီကော်မတီလူကြီးတွေ လုပ်ဆောင်ပုံကလည်း သိပ်အားမရဘူး၊ ကျေနပ်မှု မရှိဘူး" ဟု ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
အောင်လံမြို့နယ်အပိုင် စမ်းတောင်ကွင်း၊ စားကျက်တော၊ ရွာထောင်၊ ဆာပါ၊ စမ်းကလေး၊ ကျောင်းစု၊ ရွာမစု၊ ရေတွင်းစု ကျေးရွာများမှ တောင်သူ ၇ဝ နှင့် မြို့လှရွာသား ၅၇ ဦးက အောင်လံမြို့ရှိ အမှတ် ၅ သကြားစက်ရုံမှူးက ကြံကို မစိုက်မနေရ စိုက်ခိုင်းနေ၍ ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ရသည် ဆိုကာ ရန်ကုန်အခြေစိုက် ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (အိုင်အယ်လ်အို) ကိုယ်စားလှယ်ရုံးသို့ တိုင်တန်းမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အခင်းဖြစ်ပွားရာ လယ်များတွင် အစဉ်အလာအားဖြင့်ဝါ၊ နှမ်း၊ ပဲတီစိမ်းနှင့် နွားစာအဖြစ် ပြောင်းကို အဓိက စိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည်။
တောင်သူများ အပြောအရ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လအတွင်းက ကြံများကို စတင်စိုက်ပျိုးရာတွင် လုံးဝ အောင်မြင်မှု မရှိဟု ဆိုသည်။
"အဲဒီ မြေတွေကဗျာ။ အခုတော့ ဘာအပင်မှ မပေါက်ဘဲ ကွင်းပြင်ကြီးပဲပေါ့ဗျာ။ အပြောင်ရှင်း မြေကွက်ကြီးတွေနဲ့၊ အဝေးကြည့်အနေနဲ့ ပေါ်ပေါက်နေတာပေါ့ဗျာ၊ ဘာမှ မရှိဘူး။ ကျနော်တို့ကတော့ ကျနော်တို့ မြေတွေကို ပြန်တောင်းထားပါတယ်" ဟု ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
သူက ဆက်ပြီး "ကျနော်တို့ နွားတွေလည်း အစားရေစာ ငတ်ပြီးတော့ အတိဒုက္ခ ရောက်နေပါပြီ။ နွားတွေ ရောင်းပစ်ရတဲ့ လူတွေလည်း ရောင်းလိုက်ကြပါပြီ။ ဝမ်းစာလည်း လှောင်ဖို့ မရှိပါဘူး။ ဒီလို ဒုက္ခအမျိုးမျိုး ကြုံတွေ့ရတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ နွားစားကျက်တောနဲ့ လယ်တွေကို ပြန်လိုချင်တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံ မြန်မာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ကော်ပိုရေးရှင်း (MEC) မှ ဖွင့်ထားသည့် သကြားစက်ရုံမှ စက်ရုံမှူး ဗိုလ်မှူး ရဲနိုင်သည် စက်ရုံအတွက် လိုအပ်သော ကုန်ကြမ်း ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် ဒေသတွင်း လယ်ယာမြေများတွင် သကြား မစိုက်မနေရ စိုက်ရမည်ဟု ညွှန်ကြားချက် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ၂ဝဝ၇ မေလ ၁၅ ရက်တွင် စက်ရုံဌာနမှူး ဦးတင်အုန်းနှင့် ဦးကျော်ကျော်စိုး အဖွဲ့က အောင်လံ အရှေ့ဘက် ၂ မိုင်ခန့် အကွာရှိ စမ်းတောင်ကွင်းနှင့် မြို့လှကျေးရွာ တောင်သူလယ်သမားများ၏ လယ်ယာမြေများတွင် အလံနှင့် တိုင်များ စိုက်ထူကာ ကြံစိုက်ကွင်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:15 AM0comments
သားဇောနဲ့အကြွေစောခဲ့တဲ့ သစ်ရွက်ဝါ
လူငယ်တွေ က လက်ဆင့်ကမ်းသယ်..
အနာဂတ်ကို ပုံဖွဲ့ ရေးခဲ့..
သမိုင်းဆိုတာ အဖုံးအုပ်လို့မလုံဖူး
မျိုးဆက်သစ်ဟာ ရွက်ဝါ ဆုတ်တဲ့အချိန်
စိမ်းလမ်းလှပ ပုရစ်ဖူးငုံနဲ့ ဘ၀ကိုစတယ်။
လူငယ့်အားသည်သာ လူ့ သမိုင်းကိုလှပစေတဲ့ အရာ။
ကျုပ်အဖေ က ၀ါကြွားဖူးတယ်ဗျာ..
ငတ်သေတဲ့ မသာမရှိတဲ့ ဒို့ ဗမာပြည်။
ကိုယ်စိုက်တဲ့ စပါး ကိုယ်စားနိုင်သေးတယ်..
ရှိတဲ့သဘာဝသယံဇာတ..
လူတွေ ငတ်နေပြီ အဘရေ။
ကဲ အပြစ်ဆိုသမျှ ခံရမဲ့ဘ၀..
ကျူပ်တို့ ခေတ်ကျမှ ညံ့ပါတယ်ဗျ။
ဒါပေမဲ့ ကျုပ် သားလူလေးခေတ်..
ဒီလို အာဏာရှင်နွံ့မနစ်ရစေဖူး
သားလေး သက်ဦးမောင် ရေ..
ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ နေ ပီတိနဲ့ သေရင်..
အမှောင်ထဲ အနှစ် ၈၀..
ငိုကြွေးမှုနဲ့လူမလုပ်နဲ့ ..
လူတယောက် ရေတစ်စက် နှမ်းတစ်လုံး
လွတ်လပ်မှုကို ခူးရန်မမေ့နဲ့ ..
လက်မှတ်ထိုး ကန်ပိန်း တွေလုပ်
အင်္ဂါနေ့ ဆုတောင်းမှုတွေ လုပ်..
သူ့ အနာဂတ် အတွက် သူ လှုပ်ရှားတဲ့သား..
အဖေ အနားမှာရှိတယ်. ရဲစခန်းထိ အဖေလာတွေ့ မယ်။
ငွေညှစ်တောင်းနေကျ ပုလိပ်ဆိုး ပန်းသီး..
“ ဟဲ့ ဟဲ့ မင်းတို့ ဒီလိုမတရားမလုပ်နဲ့ လေ
င့ါသား လည်း ဖမ်း..ငါ့ကို လည်းဖမ်း
နင်တို့ ဖမ်းထား..ငါသားလေး ဘယ်မှာလည်း
ငါ့သားမျက်နှာ တွေ့ မှဖြစ်မယ်။ .
ဘယ်မလည်း ၀ရမ်းပြ။ မတရားမလုပ်ကြနဲ့”
“ အံမာ…ဒီလူကြီးတော်တော် လျှာရှည်..
သူ့ သားကို မြှောက်ပေးနေတာ သူဘဲ သူဘဲ
ငါ XXX မသား..ခွေးကြီး…မသာကြီး..
နအဖ တွေ ဒီလောက်ကောင်း..
ဒီလိုနဲ့ တစ်ချက်ပြီး တစ်ချက်…
လက်ထိပ်နဲ့ ခတ်.ကိုယ်နဲ့ ဖိထပ်
လက်သီးနဲ့ ထိုး ဒုတ်တိုနဲ့ ရိုက်
ဖနောင့်နဲ့ပေါက် ခြေနဲ့ ဆောင့်
စီးကျစိုရွှဲ တစ်စက်ပြီး တစ်စက်
လူကို ခွေးတွေ ၀ိုင်းဆွဲကြတာ..
ဘုန်းကြီးခေါင်းတွေ ရိုက်ခံရတဲ့ ဝေဒနာ..
ဘယ်လိုဆိုတာ ကျုပ် နားလည်ပြီအဘ..
အမိုက်မဲလေးတွေ.. မိဘ မသွန်သင်..
ဒီလို လူတွေ နေရာရ..
၀မ်းနည်းရင်းနဲ့ ..ကျုပ်မျက်ဝန်းတွေ ဝေ..
သားအတွက် သတင်းမေးသွားသူ ဖခင်ကို ရဲက ရိုက်နှက်လို့ သေဆုံး မဇ္ဈိမ(ချင်းမိုင်) ။ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး လက်မှတ်ထိုး ကန်ပိန်း လှုပ်ရှားသော သားငယ် ဖမ်းဆီးခံထားရ၍ သတင်းမေး သွားသူ ဖခင်ကို ရဲက ရိုက်နှက်၍ သေဆုံးမှုတခု မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သေသူ၏ မိသားစုဝင်များက ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရဲစခန်းတွင် ဖမ်းခံထားရသူ မောင်သက်ဦးမောင် အတွက် သွားရောက် စုံစမ်းသူ အမှတ် ၂ ရပ်ကွက်နေ ဦးကျော့မောင် (အသက် ၅၆ နှစ်)ကို ရဲတပ်သား ပန်းသီးနှင့် ရယက ရာအိမ်မှူးဟောင်း ကိုဝင်းချိုတို့က သုမာလာ လမ်းဆုံ အနီးတွင် အောက်တို ဘာလ ၈ ရက်နေ့ မွန်းလွဲတွင် ဝိုင်းရိုက်ခဲ့ရာမှ သေဆုံး သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မိသားစုဝင်က ပြောသည်။
အာဏာပိုင်များက ရန်မူမှာစိုး၍ မဇ္ဈိမနှင့် ဆက်သွယ်ရရှိသူ ဆွေမျိုးရင်း တဦးက အမည် မသုံးရန် မေတ္တာ ရပ်ခံခဲ့သည်။
ဦးကျော့မောင်သည် ကိုယ်ပိုင်ကားဖြင့် ကျောင်းကားပြေးဆွဲနေသူ ဖြစ်ပြီး သူ၏ မောင်သက်ဦးမောင်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် အင်္ဂါနေ့ ဆုတောင်းမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့ဖူးသူလည်း ဖြစ်သည်။
“အဖေက ခေါင်းထဲ သွေးခဲပြီး ဆုံးသွားတယ်လို့ ဆရာဝန်က ပြောပါတယ်။ မြောက်ဥက္ကလာ ဆေးရုံ တင်လိုက်ရတာက ၈ ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီလောက်က တင်လိုက်တာ။ ဆရာဝန်က ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြော ရန်ကုန် ဆေးရုံကို ပို့ရမယ် ပြောတယ်။ မပို့ခင် ၉ ရက်နေ့ မနက် ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှာ ဆုံးသွားတာပါ” ဟု ဆွေမျိုးရင်းဖြစ်သူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အသက် ၅၆ နှစ်ရှိ ဦးကျော့မောင်သည် သားဖြစ်သူ ရဲစခန်းတွင် အဖမ်းခံထားရသော မောင်သက်ဦးမောင်၏ သတင်းကို သွားရောက် စုံစမ်းစဉ် သုမာလာလမ်းဆုံတွင် ရဲတပ်သား ပန်းသီးနှင့် ရယက ရာအိမ်မှူးဟောင်း ကိုဝင်းချိုတို့ နှစ်ဦး က သုမာလာလမ်းဆုံတွင် အောက်တိုဘာ ၈ ရက် နေ့က လက်ထိပ်ခတ်၍ ဝိုင်းရိုက်သဖြင့် ဦးခေါင်း၌ သွေးခဲ သေဆုံးခဲ့သည်ဆိုကာ မိသားစုဝင်များက လူသတ်မှု ၃၀၂ (က) ဖြင့် အမှုဖွင့် ထားသည်။
ယနေ့တွင် သေသူ၏ ရက်လည်ဆွမ်းကျွေးမှုကို နေအိမ်၌ ပြု လုပ်ခဲ့ရာ မြို့နယ်ရဲများက ဓါတ်ပုံ ရိုက်ယူခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး လက်မှတ်ထိုး ကန်ပိန်းလှုပ်ရှားခဲ့သူ ကွယ်လွန်သူ၏သား၊ မောင်သက်ဦးမောင်အား မြောက်ဥက္ကလာ ရဲစခန်းမှတဆင့် အင်းစိန်ထောင်တွင်း၌ ဖမ်းဆီးထားရာမှ ယနေ့ လွတ်ရက်စေ့သော်လည်း မလွတ်လာသေးကြောင်း မိသားစုဝင် တဦးက ပြောသည်။
ယခုလ ၇ ရက်နေ့က မြောက်ဥက္ကလာ အထက်တန်းကျောင်း တကျောင်းမှ ၉ တန်း ကျောင်းသားများ ရန်ဖြစ်မှုတွင် ပါဝင်သည်ဟု စွပ်စွဲကာ မောင်သက်ဦးမောင်အား ရဲက ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:11 AM 1 comments